Labo nin oo qaxooti ah oo ku kacay arin foolxun oo xabsi iyo musaafurin lagu xukumay | Somaliska
Shalay waxaa maxkamad ay labo sano oo xabsi ah iyo musaafurin ku xukuntay labo nin oo markii hore isku dhiibay in ay yihiin caruur qaxooti ah. Labadaan nin ayaa lagu maxkamadeeyay ka dib markii ay wiilyar oo 12-sano jir ah ay ku kufsadeen magaalada Alvesta bishii Janaayo 4. Raggaan ayaa markii ay isdhiibeen waxay sheegteen in ay yihiin 15 iyo 16 sano balse maxkamada ayaa sheegtay in ay yihiin qaangaar oo mid ka mid ah uu dhashay 1977.
Raggaan ayaa markii ay kufsiga u geysteen wiilka yar ayay xitaa ka duubeen video ay moobeelkooda ku kaydiyaan kaasoo ay maxkamadu u isticmaashay cadeyn ahaan. Labadaan nin oo ka soo jeeda Afghanistan ayaa marka ay dhamaystaan xabsiga laga musaafurin doonaa Sweden.
Ma ahan markii ugu horeysay ee ay ficilo la xiriira kufsi ay ku kacaan qaar ka mid ah dhalinyarada isku dhiibta caruurta qaxootiga ah. Booliska ayaa shalay sidoo kale soo xiray nin 19-sano jir ah oo lagu eedeeyay in uu xero qaxooti oo ku taala gobolka Västernorrland ku kufsaday wiilyar oo 6-sano jir ah oo isagana qaxooti ah.
Asc waa ariiin yaableh waye nin 39 jiro inu isku dhiibo 15 ama 16 tobaan. Ilmahii sa ayan 20 jir noqonkara markas ayeey waxeey uso noqonaayan ilma 12
Aniga sweden waa ku racsanaayhay waxii wax xoogo ama kufsado ineey wadanka da ka sartaan haduuba qofka qoxooti yahaay ilaahow medborg ha haysto hadu rabo
.Waa Aniga raiyi geeyga wabilaahi towfiiq
Subxaanalaah malahaa ma ahan kusiga naqaan ee waa mid kale waayo wadankan kusiga uma yaqaanin kaliyah midka la isku tago waa noocya badan yahay marka talow waa kee !!!
malaha waa dad xanuun qaba ee cid daweysana aan helin waxaan dhihi lahaay si qota dheer haloo baaro caafi maad kooda